Umjovo oqondile owenziwe ngokwezifiso nokubuyisela imigqa yokukhiqiza encibilikisiwe yamakhasimende anezinhlobo ezisukela ku-400mm-1600mm. Umugqa wokukhiqizwa ophindaphindwayo angeke usetshenziselwe ukukhiqiza izindwangu ezincibilikisiwe kuphela, kepha futhi nokwenza izinto zokuhlunga uketshezi nezinto zokuhlunga umoya. Izinto zokuhlunga ze-Liquid zisetshenziselwa kakhulu emkhakheni wezokwelapha ngamanzi, embonini kaphethiloli neyamakhemikhali, ngesakhiwo esifanayo, ukunemba okuphezulu kokufafazwa, umphumela osobala, nomthamo onamandla wokubamba ukungcola nempilo ende yokusebenza. Izinto zokuhlunga umoya zisetshenziswa kakhulu ezinhlelweni zokuhlanza umoya, kufaka phakathi kepha azikhawulwanga ekuhlanzweni komoya wasendlini, ukufethelwa komoya wokufakelwa kwezimoto, njll. Kunezinzuzo zokusebenzisa kahle kakhulu kanye nomthamo ophezulu wothuli.
Lo mshini awukwazi ukwenza kuphela ukukhiqizwa kwezinto zokuhlunga uketshezi, kodwa futhi nokungahambi kahle okuwugqinsi kakhulu. Ngokushintsha ibanga elikude ukubuyela emuva naphambili, futhi nesivinini, umugqa wokukhiqiza wokuphindisela ungenza okungelona ukweluka kube likhulu. Ngemuva kwalokho, le ndwangu yayingasetshenziselwa ukwenza indwangu efudumele, ukwenza ukuthi i-quake nenye into igcine abantu befudumele.
Ngokumangazayo, izinsuku zakamuva, onjiniyela benkampani yethu bahlela ukwenza ungqimba lwamanzi lwamamukeli e-Baby diapers. Futhi bathole impumelelo emangalisayo. Umkhiqizo owenziwe umugqa wokukhiqizwa kokubuyiselwa kabusha ungabamba amanzi kalula. Ngakho-ke umsebenzi womugqa wethu wokukhiqiza wokubuyiselwa uhlukahlukene. Ezinsukwini ezizayo, iqembu lobuchwepheshe lenkampani yethu lizothuthukisa umsebenzi owengeziwe womugqa wokukhiqiza wokubuyisela.
Ngaphandle komugqa wokukhiqizwa kwendwangu oncibilikisiwe, umshini wemaski wobuso nawo ungumkhiqizi wenkampani yethu. Ngokwalokho okufunwa yikhasimende, inkampani yethu ingahlinzeka ngohlobo oluhlukile lomshini wokwakha imaskhi.